Kol. Gammachuu hidhame!Hidhaan hoggantootafi deeggartoota ABO akkuma itti fufetti jira. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKol. Gammachuu hidhame!Hidhaan hoggantootafi deeggartoota ABO akkuma itti fufetti jira.
G-7 ABO fi Miseensota ABO dabalatee, qabsaa’ota Oromoo dhoksaan Oromiyaa keessa deemee akka ajjeesuuf ODP ayyama laateef
Torban darbe Buraanuu Naggaa ABO rukutnaa ayyama nuu laadhaa jedhee waajjira MM Dr. Abiyyitti xalayaa barreessuun kan yaadatamudha. Xalayaa sana irraa fuudhanii akka marii gaggeessaa turan torban darbe dubbatamaa ture.
Waraanni G-7 erga biyyatti galee leenji’e malee duratti muraasa ta’uun beekamaadha. Waraanni kun Amaaraa keessatti bakkoota addaa addaatti lenjiirra turan. Kanneen eebbifaman illee jiru. Isaan kanaaf ayyamaa ABO rukutuuf hidhuu mootummaan laateefii Oromiyaa keessatti bobbaa’aanii jiru. Waraana kanaaf akka basaasaatti miseensota ODP gargaaraa jedhameenii hojiitti seenanii jiru.
ODP akka duraa callisanii nama ukkaamsuu utuu hintaane dursanii akka sabboontota Oromoo irratti holola oofuu qabanis ajajichi hubachiisee jira. Sababaan sabboobtotni gaafa wareegaman uummatni akka hindubbanne, sabboontotni gaafa hidhaman hawwaasni akka hindubbanneef itti yaadamee hojiirra oole jedhan
Maqaa WBO ardaayiitaan OPDO’n Qarshii fudhatanii jiru.
“Oduu golaa OPDO/ODP dhufee
Miseensoota WBO ertiradhaa dhufanii Ardayiitaa leenjii irraa turaan hojii ittii umuu fi ittiin qubsiisuuf qarshii miliyoona kudhaan hogatootnii OPDO/ODP bankii wagageen kawataan jetii odeessii achii dhuftee maqaa namoota kanaf lakk bankii qorachaa jirraa isiniif ifoomsiina .
Dhugaan yomuu mo’adha qarshii duriis nyaatanii nyaachiisaa turaan ammas ittii dhufanii jiruu”
Hiidhan jabaate jira haaluma kanaan Wallaggaa Lixa Jaarsooti namooti kuneen RIB qabamani jiru isanis
1 Lookoo Guutamaa Manguddoo waggaa 65
2 Dawiit Qajeelaa Abbaa Gadaa Jaarsoo
3 Dabala Fiqiruu
4 Diinqaa Adamuu
5 Fiqiruu Tadasaa barsisa
6 Cuuccaa Mulgeeta
Namooni kuneen badii tokko malee qabamanii guyyaaf halkaan mani itti cuufame uukkafamani ola jiru.
Bu’aan haroomsa Oromoo hiidhuudha!
(SBO – AMAJJII 18,2019) Hidhaan hoggantootafi deeggartoota ABO akkuma itti fufetti jira.
Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi waayilli isaa Faqqadaa Raggaasaa kaleessa toora sa’aatii 11 irraa kaasanii kan dhabaman yoo ta’u barbaachafi iyyaafannoo guddoon booddee humna poolisii Federaalaa fi Tika mootummaatin butamanii buufata poolisii 3ffaa keessatti hidhamanii akka jiran irra geenye.
#koloneel Gammachuufi Faqqadaa dafaa atattamaan gadhiisaa!
Kol. Gammachuu hidhame!!
Amma akkasitti wal adamsaa wal hidhaa ODPn nagaa argattee biyya kana bulchuu dandeessii !?
Gatii guda hakafalu malee nu-Oromon Lixaa Baha Kibba ABO/Wajiin dhabana. Kashalabbeen dulati OPDO saba Oromo waga 27 gutu saynii Oromo wayanre wajiin dugugdee asiin nu- geesee OPDO diaspora wajiin Qabsoo Qeerroo butee(Hijack gotee ) Amma’mo Abashan wajiin tatee ABO/WBO rukuchuun hin dandaa’mu . kuni fedha Ummata Oromo hundati . propaganda wayanee fakkatuun asbatee Oromon gowwomuu hin-qabuu. Nu gahee jirraa . (Enough is enough )/
OPDO kashallabee hunda waaliti guratee qarshi biliiona Qeerroofi saba Oromo jijiruu dhaf kutatee katee jirti Waan kana’mo Oromon falmachu qaba. wari yeroo Amma gara Saree OPDOti yada jijiramaa jirtan off-eegannoo cimma godhadha seennan Siin gafati guyyaa tokko . OPDPn yeroo Amma kana ABO/OLF xureesuu dhaf jarsolii #Diaspora irraa guratee Kuno hotella galchitee qalaba jirti . kuni salpina gudha dha Oromo dhaf garu Jaroni kuni effectifi ykn Oromo dhaf gati hin-qabani . Haree dulati maale goti minan fee’u hindandeesum bar . OPDOn Abasha wajiin wali tatee Oromo akka Oromo hin-tanee Oromumma isaa akka hin-jabeefanee gochaa jirti maqa Ethiopiumma dhan . Artist Oromo hunda an qabsoo Oromo keesaa turani Qarshi millionan itidhangalaftee jirti dulatin OPDO yeroo kana . maqaa sani dabu hin-barbadu garu guyyaa tokko seennan san gafati kana beeka .
Ethiopian Abashan yeroo Amma kana wan hojacha jiraan laalu dandeesuu kuni Oromo hundafi salphina dha . Bayy’een gadhee . Oromo hunda xureesaa jiruu akka malee . Kanafu Oromumma keenya eggu dhaf Oromon hundi ABO/OLF dhigan ijjaramee kana birraa dhabacuu qabna .
Oromon ABO/OLF malee hin-kabajamtuu kana beeka . Waan dhuga ho jalatani Dubin kanumma Galatoma.
OPDO should go !
We stand with ABO/OLF for ever !!